Nodinihina nandritra ny filan-kevitry ny Governemanta, ny faran’ny herinandro teo, ny mikasika ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny kilalao mampiasa vola na ny “jeux d’argent” sy ny “jeux de hasard”. 21 décembre 2020
Efa tamin’ny taona 1971 no nisy io lalàna, io raha ny fanazavana saingy tsapa ankehitriny fa tsy mifanaraka intsony amin’ny toe-java-misy intsony. Efa miha mivoatra tokoa izy ireny, raha tsy hilaza afa-tsy ny amin’ny sehatry ny aterneto. Kendrena ihany koa ny mba hifanarahan’ireo karazan-dalao ireny amin’ny soatoavina malagasy. « Izany indrindra no mibaiko antsika tsy maintsy hanavao ny lalàna rehetra mifehy ny kilalao rehetra izay mampiasa vola, kanefa atao mifanaraka sy manaja ny soatoavina malagasy », hoy ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta.
Tsiahivina fa notanterahina tao Antsirabe ny filan-kevitry ny governemanta tamin’ny sabotsy lasa teo, ho tohin’ny fivoriana fanao isan-kerinandro ao amin’ny Lapan’i Mahazoarivo. Tsy maintsy misy hatrany ny fandinihana ireo raharaha maika mahakasika ny Firenena na dia amin’izao ankatoky ny fety izao aza sy efa hifaranan’ny taona izao.